ဖြိုး အလ်ဝိုင်: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသို့
ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ရရင်တော့ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်တော်ချောဖြစ်ပါ့တယ်... ကမ္ဘာပေါ်မှာ မတူညီတဲ့ ဝါဒ များ စွာ ရှိသည့်အထဲမှ ကျွန်တော်ဟာ မှန်ကန်သောအယူဝါဒကိုသာလျှင် သက်ဝင်ယုံကြည့်သူဖြစ်ပါတယ်.... ကိုပီတာရဲ့ အတွေးပုံရိပ်များ ဝဘ်ဆိုဒ်သည် အခြားကိုးကွယ်သော ဘာသာဝင်များအား ချိတ်စောင်းမြောင်းပြီး စော်ကားတာကို ခဏခဏပင်တွေ့ရပါတယ်... သတိပေးခဲံသောလည်း ဂရုမမူပါဘူး ၊ မိမိဘာသာဆိုလျှင် အပြစ်အနာဆာ မရှိ အခြားဘာသာများဆို ရစရာမရှိအောင် မှိုချိုးမျစ်ချိုး ပြောတတ်သော ပီတာနှင့် ကိုယ်ရွှေမြန်မာတို့အား ရည်၇ွှယ်၍ ဒီဝဘ်ဆိုဒ်လေးအား လုပ်ဖြစ်သွားရပါတယ်.... အရင်ဆုံး ကျွန်တော် သူဝဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ ဤကဲ့သို့ သွားရေးခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်တော်ချော......အေးကွာ ပီတာရာ ငါတို့နိူင်ငံလည်း ကုလားရဲ့ အယူဝါဒတွေ ရပြီး ဘောင်းဘီ ဝတ်တတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမူကနေ ပုဆိုးဝတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမူကို မြန်မာယဉ်ကျေးမူအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တာကလည်း သာဓကပါပဲ ကွယ်...ငါတို့လည်း ပြည်ပရောက်မှ ငါတို့နိူင်ငံ၇ဲ့ လိမ်လည်မူတွေ ကို များစွာသိရတော့တယ်. ကုလားသမိုင်း ကို မြန်မာသမိုင်း အဖြစ်သတ်မှတ်တာတို့ အားအားနေဖွန်ကြောင်နေတဲကျန်စစ်သားလို ကောင်တွေ ကို သူရဲ့ကောင်းလို့ သတ်မှတ် တာတို့ ....ဘုန်းကြီးမှ လိမ်လည်ပြီး အနောက်နိူင်ငံများဟာ ယဉ်ကျေးမူမရှိဘူး မဟုတ်တန်ရာစကားတွေ နဲ့ ကြမ်းပိုးကို လ်ိပ်ဖြစ်အောင် ပြော လိပ်ကို ကြိမ်းပိုးဖြစ်အောင် ပြောတဲ့ ဘုန်းကြီး၇ဲ့ ရောက်တန်ရာရာ အဓိပ္ပါယ်မရှိစကား...တွေ နဲ့ တကယ်တမ်းတော့ ဒို့နိူင်ငံဟာ ပြည်ပရောက်တော့မှပဲ ယဉ်ကျေးမူမဖွံွ့ဖြိုးသေးတဲံနိူင်ငံ ဘရိန်းကိုဆေးခံနေရတဲ့ နိူင်ငံအဖြစ်သိ မြင်လာတော့မယ်.... Idenitily ပျောက်တဲ့ ကျားဆိုအကြောင်းအရာလို့ပါပဲကွာ....မင်းကို မင်းပြည်ပရောက်မှ မင်းရဲ့ အမြင်တွေ ပို၍ကျယ်လာတယ် သိမြင်လာတယ်ဆိုတာ မင်းကိုယ်မင်းတော့ မင်းသိမှာပါ ဒီလိုခံစားချက်ကို ပြည်ပရောက်တဲ့ မြန်မာတိုင်း သိတယ်....
Watcher:...... Hello Kotawchaw Don't force the issue. Interpret your own and measure twice yourself then publish it. Dear Ko Peter, Funny, while reading white Tiger post. Thanks to you.
ကိုယ်တော်ချော:.... hey Watcher!I don`t force to him.I got know about he want to against to all other religions.I don`t like to against other religions.You can know buddhist people are at least in this world...
ကိုယ်တော်ချော:.... but they(you) are blame other religions.hey Watcher,you,should be give yourself as washer becasue they(monks) have washed all of your brain by the buddhawin thesis . So you all are not notice about what is true an false.Buddhism Monks never say and walk on the true.
ကိုယ်တော်ချော:.....(buddhist monk) they are worry about buddhism haven`t respect to them and they will be destitute.They are very lazy and they haven`t want to seek the food their own hand.
ကိုယ်တော်ချော: I have washed my brain but I get visible about true and false when I got to foreign.
မျိုးလွင်:..... ကိုယ်တော်ချော.. ရေ..။ ပြောချင်တာတွေ လျောက်ပြောနေပ့ါလား.. ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်.. အခြေအမြစ် ဗုဒ္ဓဘာသာကို မလေ့လာပဲ ပြောချင်တာတွေ ပြောနေပါ့လား။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဦးနှောက်ကောင်းတယ်ထင်ရင်တော့ လေ့လာပါအုံး..။
Watcher:....Hello Kotawchaw! You must be tired of past and present of your life! Do you know about mutal respect ! Please read it evolution of life on Earth (Nicholas H. Barton). It is basic level of book.
Watcher:....Hello Kotawchaw,After that discuss me!. If slow reader will take2years for understanding. Next books will be gotten after that, I hope that you will still on the earth! Good bye!!!
ကိုယ်တော်ချော:....ha ha Washer why don`t you give to me Buddhist monk autobiography letters.let me say I don`t need to read more book.Becasue I am know which is buddhist religion lies.
ကိုယ်တော်ချော: မျိုးလွင် ရေ ငါက ဗုဒ္ဒဘာသာမသိတာမဟုတ်ဘူးကွာ မင်းထက်တောင် သိသေးတယ် သိလို့လည်း ဗုဒ္ဓဘာသရဲ့ အလိမ်အညာတွေကို ငါပြောနိူင်တယ်... မင်းကို မေးခွန်း အများကြီး မေးစရာရှိတယ် အရင်ဆုံး ဂေါတာမက ဘာလူမျိုးလဲ ဘယ်မှာ မွေးလဲ ဘယ်နိူင်ငံသားလဲ သူမှာ မယားဘယ်နှစ်ယောက်၇ှိလဲ သူရဲ့ မယားတယောက်ကို ထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြထားပြီး ကျန်တဲ့ မယားနာမည်တွေ ကို ဖျောက်ထားလဲ သူပြောတဲ့ သူရဲ့အတွေးအခေါ်က ဟုတ်မလို့နဲ့ တကယ့်ကို မှားယွင်းနေတာ တွေ့ရတယ် အရာအားလုံးဟာ သဘာဝကြောင့် ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် ဘာလို့ ငရဲ့ဆိုတာ ရှိရသေးလဲ နိဗ္ဖာန်ဆိုတာ လဲ ဘာလို့ ရှိဖို့လိုမလဲ ဟားဟာ့း အ၇ုးတွေ ပဲယုံ ငရဲနဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကို ဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲ အဲ့တာတွေ လည်း သူတို့ဟာသူတို့ ဖြစ်လာတာပဲလား ဟားဟား သူဟာသူ သဘာဝကြောင့် ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် မင်းကောငါကော ကောင်းအောင် ကျင့်ဖို့ လို့အုံးမလား ဟားဟား အ၇ူးတွေ ပဲယုံ တကယ်တို့ ဒါိုနိူင်ငံ ကို အဓိက ပျက်စီးနေတာ ဘုန်းကြီးတွေ သူတို့ စောက်ပျင်းကျပြီး စောက်အလုပ်မလုပ်ချင်ဘဲ သူများကျွေးတာ စားချင်လို့ ဘာသာတရားကို မဟုတ်မမှန်တဲံ သွန်သင်ချက်တွေ နဲ့ ဆွဲသွင်း ဗုဒ္ဒဘာသာပျောက်မှာ ကို သူအဖေအမေ သေမှာထက်ကို ကြောက်တာ ဗုဒ္ဒဘာသာပျောက်မှာရင် သူတို့ ဘုံပျောက်မယ် ထမင်းငတ်မယ်လေ အိန္ဒိယနိူင်ငံမှာ နိပေါကုလားကိုလည်း မြန်မာနိူင်ငံသား လုပ်လို့ လုပ် ဟေ့ကောင် တွေ ဗုဒ္ဒဂေါတာမ သမိုင်းကြောင်းကို အမှန်ဖတ်ချင်ရင် english လို့ ရှာဖတ် တခုတည်းစုံတာ မဟုတ်ဘူးနော်.... သုံးလေးခုလောက် ရှာဖတ်ပါ....
Watcher: Hello Kotawchaw, Ha! Ha! You did enter my trap! It is not Budda literature at all. Find to Wikipedia website for some piece. It is Science book (poor!). Why I tell you1 you should know basic level in For Kotawchaw,your mind then discuss to people. As you know! Today is Technology World. I knew that you have already accepted for material advance. When you mature (after 100 Century) you know what For Kotawchaw,science law (update)and Budda ways are eqauls (I will give more literature later on) Please do not waste my time ! Thank you for becoming polite. Good Bye!
ကိုယ်တော်ချော: ha ha guy, you are brainless.We living in 21 century like you say Technology world.ha ha but Science knowledge and Buddha philoshophy are very different ,son.please show me, who is believer in most of scientists to buddha?you try to find the true way for your life.I don`t care which you will seek or not, but you don`t againt any religion.ha ha Watcher,you, must beaPeter.I don`t wanna to say more you got feel.but I will cut off to your mouth if you are againt to the other religion likeadog.I just only describe which buddha religion havealot of lies.Let me say for you take care of your time with true religion!!
Watcher: Kotawchaw,Ops! mistake again boy! I am female. Understand that categories! I put blame on myself! Should know and neglect before because receiver is null.
ကိုယ်တော်ချော: no no .Honey!you don`t need to give the sin youself.I don`t know well that who are you .I make mistake toalot of pain on you.Sorry baby ,Sorry Honey ,please forgive me.
ကိုယ်တော်ချော: အထီးလား အမလား ခြောက်ထီးလား တော့ မသိဘူး မင်းတို့ ငါမေးထားတဲ့ မေးခွန်းကို တခုမှ မဖြေသေးဘူး watcher ခြောက်ထီးလား ဘောပြားမလားတော့ မသိဘူး ရုးများရုးနေလား မသိပါ..ပထမက ငါ့ကို အပြစ်တင်တယ်....
သူပြောချင်တာက အပြင်သဏ္ဌန်ကို ဦးစားပေးတယ်တဲ့ ငါက နင့်တို့ ထက် မမြင်ရတဲ့ စွမ်းအားရဲ့ တန်ခိုးကို ပိုပြီး ယုံကြည့်တဲ့သူ မဟုတ်မမှန် ဒဏ္ဌာရီ ပုံပြင် ဆန်ဆန် စကားတွေ ကို တော့ မယုံဘူးဟေ...အခုကြတော့ ကိုယ့ကိုယ်ကို အပြစ်တင်နေပါလား ဟားဟား ညီမရေ ယောက်ျင်္ား၇ှိတယ်ဆိုရင်လဲ ကိုယ်ယောင်္ကျားကို ဒုက္ခမပေးပါနဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြပါ.... ယောင်္ကျားမရှိရင်တော့ ကိုယ်တော့ မင်းလေးကို မစဉ်းစားဘူးကွယ်...ညီမကို ကိုယ်မေးခွန်းလေ ထက်မေးခဲ့မယ် ဂေါတာမအရပ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ....ရှင်တော် ဂေါတမသည် သာမန်လူတို့ထက် အစစ အရာရာတွင် ကြီးမားသာလွန်းကြောင်းပြောဆိုကြပါသည်၊ ပြောလိုကပြော နိုင်ပါသည်၊ သို့သော် ယုတ္တိ တန်သည် ၊ မတန်သည်ကို မေးကြည့်...သာမန်ထက်ကြီး၍ ကြီးရမည် ရှင်တော် ဂေါတမသည် သာမန်လူတို့ထက် အစစ အရာရာတွင် ကြီးမားသာလွန်းကြောင်းပြောဆိုကြပါသည်၊ ပြောလိုကပြော နိုင်ပါသည်၊..သို့သော် ယုတ္တိ တန်သည် ၊ မတန်သည်ကို မေးကြည့်ရပါက၊ သူ၏တထွာသည် သာမန်လူ သုံးတောင်ဟူ၍ ဆိုသောကြောင့် ၊ သူ့အနေဖြင့် အဘယ်သို့ဖြင့် သာမန် အမျိုးသမီးဖြစ်သော ယသော်ဓယာ ဖြင့်ဆက်ဆံ၍ သားရတနာ ရနိုင်ပါအံ့နည်း။ ရသေ့စိတ်ဖြေနည်းဖြင့်ကားတော့ ကလေးမရနိုင်ကောင်းပါပေ၊ တဖန် ထိုင်ကြည့်ယုံဖြင့် သန္ဓေတည်သည်ဆိုပါက တဖုံ စဉ်းစားပေးနိုင်ပေသည်။ဟိဟိ ဘယ်ကျမ်းမှာ လည်းလို့မေးစရာ မလိုအပ်ပါ၊ ယနေ့ ခြောက်ထပ်ကြီး ဘုရားသွားရင်းဖြင့် ပင် တိုင်းတာကာ ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဆွမ်းဘုန်းပေးသော အခါ တွင် တလုပ်တလုပ်မှာ ထန်းသီးခန့်မျ လောက်စားသည်ဟု့သိရသည်။ ကြီးကြီး ကြိုက်တဲ့ ညီမများ ဖြေရှင်းပေးပါ။ အိန္ဒိယရှေ့မြောက်ဘက်မှာ နေသော နီပေါကုလားလေး ဂေါတာမ အရပ်မှာ အဲ့လောက်၇ှိကြောင်း သိပ့္ပံနည်းကျ ဖြေဆိုပေးပါ ညီမေ၇